AMISOM oo ku dhawaaqday Saddex Maalmood oo Baroor diiq ah Sharaf Lagu Qabtay Taliyaha Booliska | Somalisan.com
Home Afsomali AMISOM oo ku dhawaaqday Saddex Maalmood oo Baroor diiq ah Sharaf...
AMISOM oo ku dhawaaqday Saddex Maalmood oo Baroor diiq ah Sharaf Lagu Qabtay Taliyaha Booliska
Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), waxa uu kormeerayaa sadex maalmood oo baroordiiq ah oo loogu magac daray gudoomiye kuxigeenka dambi-baarista Christine Alalo, kaasoo ku dhintay duulimaadkii Ethiopian Airlines ee Axaddii, 10-kii Maarso.
Shaqaalaha AMISOM iyo shaqaalahooda kale ee UN-ka iyo kuwa kale ee la shaqeeya ayaa habeenkii Khamiista isugu soo ururay xarunta dhexe ee Howlaha ee Muqdisho, si ay u saxiixaan buugga tacsida sharafkeeda, halkaa oo uu wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya iyo madaxa AMISOM Francisco Caetano Madeira ku dhawaaqay saddex maalmood barooranaya iyada xasuusta.
Dhamaan calamadaha Midawga Afrika ayaa sidoo kale duulimaadka u duulaya iyadoo dunida adduunku ay barooranayaan Guddoomiyaha Alalo iyo dhibbanayaasha kale ee shilka. Danjire Madeira ayaa sharaxaad ka bixiyay taliyaha bilayska ee u dambeeyay inuu yahay sarkaal furan oo la taliye ah, iyada oo hawsheeda shaqo iyo shirarka lala yeesho la-hawlgalayaasha AMISOM, oo uu ku daray in ay muhiim u tahay xaqiijinta sii wadidda shaqada hawsha.
“Waxay u egtahay askari oo ogaa in wakhti kasta (ayada) dhici karto, sababtoo ah dadaalku waa khatar. Sidaas awgeed waxay xaqiijisay in qof waliba ogaa waxyaabaha muhiimka ah ee loo baahan yahay in la qabto, “Ambassador Madeira ayaa hadalkiisa ku yiri shaqaalihiisa. AMISOM ayaa Jimcihii – 15-ka March – waxay qaban doonaan feejigno habeenimo ah oo lagu aqoonsanayo Guddoomiyaha Alalo oo ka qeyb qaadanaya Howlgalka Midowga Afrika iyo hoggaaminteeda aadka u saraysa ee booliska AMISOM.
Sabtida, 16-ka Maarso, hawlgalku wuxuu qaban doonaa adeegga aasaasiga ah ee aaska ee sharafkeeda. Alalo wuxuu ku biiray AMISOM bishii June 2015 isagoo ah Ku Xigeenka Guddoomiye Ku-xigeenka Booliska, meel ay ku haysay ilaa November 2017, markii ay la wareegtay hoggaanka AMISOM ee bilayska. Waxay ahayd qalab loogu talagalay bixinta hogaaminta iyo hoggaaminta isbeddelka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed si ay u noqoto mid la isku halleyn karo oo xirfad leh, iyada oo la diyaarinayo awoodda si ay uga hortagto mas’uuliyadda booliska AMISOM. Guddoomiyaha Alalo wuxuu geeriyooday intii uu ku sugnaa Talyaaniga, halkaas oo ay ka soo qaybgaleen shir.
Previous articleSomaliland Accuses Mogadishu Of Blocking Mediation Talks
Next articleThe African Union Mission in Somalia (AMISOM),
Tirada guud ee la xaqiijiyay Wadamada uu ku dhacay Caabuqa Corona:
US Africa Command Conduct First Somalia Airstrike Since Admitting Civilian Casualties
Somalisan News - April 11, 2019
Dhageyso Maxkamad markale dil toogasho ku xakuntay Askarigii loo heystay in uu dilay Wasiirkii...
Wasaaradaha Howlaha Guud ee maamul Goboleydyada Xubnaha ka ah Dowlada Fadaraalka oo sharuud...
Somalisan News - May 22, 2018